Myanmar signs up to key international convention on minimum working age ahead of the World Day Against Child Labour | United Nations in Myanmar
Amid COVID-19 crisis, ILO and UNICEF call to ‘Protect Children, Now More than Ever’
Myanmar confirmed its commitment to addressing child labour by ratifying the International Labour Organization (ILO) Minimum Age Convention on 8 June, just ahead of the World Day Against Child Labour on 12 June. The development has been heralded asapositive development, particularly in the context of the current COVID-19 crisis, which threatens the rights, safety and development of the estimated 1.13 million children in child labour across the country.
The Minimum Age Convention 138 requires countries to setaminimum age aligned with the end of compulsory education and under which no one shall be admitted to work in any occupation except light work and artistic performances. It also prohibits hazardous activities for anyone under 18 years old. In Myanmar, the minimum working age is 14 years old, as per the new Child Rights Law and existing Labour Law. The Convention also requires countries to establish national policies for the elimination of child labour.
Myanmar is the 178th country to ratify the convention and has an estimated 9.3% of the child population aged5to 17 in child labour, including more than 600,000 working in hazardous work environments.
According toanew report by the ILO and UNICEF, the 153 million children trapped in child labour around the world are at risk of entering hidden and more dangerous forms of work or working longer hours due to COVID-19.
Loss of livelihood, an illness or death in the family, displacement, and the raft of upheavals which are driving children out of school, orphaned or in financial troubles, are some of the COVID-19 related factors that are pushing millions of vulnerable children – even those atavery young age – to work in hazardous conditions. As of May 2020, more than 60,000 people have already lost their jobs in Myanmar; and as the crisis continues, deeper cuts in workers’ salaries or more employment terminations are expected to occur.
The ILO, UNICEF and partners are using the World Day Against Child Labour to draw attention to the importance of vigilance andacoordinated response to protect vulnerable children from the pandemic’s far-reaching economic and social impact.
Donglin Li, ILO Liaison Officer, called for continuous action and support to ongoing national efforts in combating child labour. “There is significant momentum towards preventing and eliminating child labour in Myanmar as it has implemented the National Action Plan on Child Labour and ratified the ILO Convention 138 on the minimum age on June 8,” Li said. “We must overcome the current COVID-19 crisis and work together to continue and reinforce the momentum to achieve Target 8.7 of the Sustainable Development Goals on elimination of child labour by 2025.”
“As we fight the impacts of COVID-19 together, we must provide additional protection for children so they are not put inasituation where they are forced into the most dangerous forms of labour, that push them to miss school and impair their health and well-being,” Alessandra Dentice, Deputy Representative of UNICEF Myanmar, added. “We need integrated approaches that strengthen child protection systems and simultaneously address poverty and inequity, improve access to and quality of education and inform and mobilize the public to respect children’s rights."
As part of the World Day Against Child Labour campaign in Myanmar, the Ministry of Labour, Immigration and Population (MoLIP), in collaboration with the ILO, and in partnership with the Embassy of Switzerland, are organizingaseries of events throughout Myanmar through until September 30. Photo exhibitions in the Central Railway Station, Dala Ferries and Junction City will open on June 15, while online campaigns and awareness raising activities across various states and regions will take place over the coming months.
Tim Enderlin, Ambassador of Switzerland to Myanmar, explained his support for the campaign: “Children simply should not work. Switzerland welcomes Myanmar’s ratification of the Minimum Age Convention. We consider this an important step forward. However,alot remains to be done and COVID19 has not made the challenges any smaller. The Swiss Embassy is proud to support this year’s campaign of the Ministry of Labour, Immigration and Population in collaboration with ILO on the World Day Against Child Labour.”
Human rights-based and child-centred response to COVID-19 recovery
The World Day Against Child Labour is celebrated worldwide annually on 12 June to call attention to the global child labour challenges and to drive collective action to end all forms of child labour by 2025.
The United Nations has declared 2021 as the International Year for the Elimination of Child Labour. While there have been significant improvements towards this goal, COVID-19 could set governments and social institutions many steps back.
The ILO is thus urging partners to join efforts that build on the respective ILO Conventions and Recommendations, the UN Convention on the Rights of the Child and protect all children in or at risk of child labour and ensure that they areapriority in the COVID-19 response. The ILO’s recommendations include:
1) Protecting workers and their families and providing livelihoods support: All employers and workers and their families should be protected from the health risks of COVID-19.
2) Strengthened social protection for all: Social protection provides essential support that helps families weather health and economic shocks.
3) Public Quality Education for All: COVID-19 has forced school closures in many countries. Children who were already working part of their time or who are at risk of child labour may never return to school so there should be low technology to no-technology interventions that allow vulnerable children to keep up.
4) Increased advocacy and partnerships: It is even more important to keep the spotlight on vulnerable children and families and to work together with all concerned partners to ensure that the needs of children are at the forefront of the crisis response.
Workers, employers and their organisations playakey role in preventing child labour by addressing the health risks at work and the economic consequences of the pandemic. Social dialogue has proven to be absolutely crucial forabalanced crisis management and response, ensuring protection of workers’ rights, the rights of children as well as business continuity.
In Myanmar, ILO’s work to combat child labour is done through the Myanmar Programme on the Elimination of Child Labour (My-PEC) , funded by the US Department of Labour.
Myanmar has ratified ILO Convention No.182 on the worst forms of child labour in December 2013. Since then collaboration to combat child labour between ILO and Myanmar started at not only in policy and legislation areas, but also in terms of the actual implementation of those policy in the ground, which includes the adoption of the first National Action Plan (NAP) on Child Labour in 2019, which includes the list of hazardous work prohibited to children under 18 as required by the Convention. On June 08 2020 Myanmar ratified ILO Convention 138 on the minimum working age.
The Government announced the creation ofaNational Child Labour Eradication Committee in 2018 to fast track the implementation of the NAP. The ultimate goal of the NAP as expressed in the Government’s manifesto says that, “By 2030 all boys and girls in Myanmar are effectively prevented and protected from child labour, especially the worst forms.”
ကိုဗစ်-၁၉ အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ (ILO) နှင့် ကုလသမဂ္ဂ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (UNICEF) တို့မှ “ကလေးငယ်များကို ယခုအချိန်မှာ ပိုမိုကာကွယ်‌ပေးရန်” အတွက် တောင်းဆိုလျက်ရှိပါသည်၊၊
မြန်မာနိုင်ငံမှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ (ILO) ၏ ပြဌာန်းချက် တစ်ခုဖြစ်သည့် အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်အရွယ်သတ်မှတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်စိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်ရေးကို ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးရန် ကတိကဝတ်ပြုလိုက်ပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ဇွန်လ (၁၂) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် ကမ္ဘာ့ကလေးအလုပ်သမားဆန့်ကျင်ရေးနေ့အကြို ထင်ရှားသော လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်လာပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ၁.၁၃ သန်းသော ကလေးအလုပ်သမားများအား ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း လုံခြုံရေး၊ အကာအကွယ်ပြုရေးနှင့် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်မှုများမှ ကာကွယ်ပေးရေးတို့အတွက် အပြုသဘောဆောင်သော တိုးတက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်လာစေမည်ဖြစ်သည်။
ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ်- ၁၃၈ အရ အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အနိမ့်ဆုံးအသက်အရွယ်သတ်မှတ်ချက်တွင် မသင်မနေရ ပညာရေးပြီးဆုံးချိန်နှင့်ကိုက်ညီရန် အနိမ့်ဆုံးအသက်အရွယ်ကို သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ပြီး ပေါ့ပါးသောအလုပ်များနှင့် အနုပညာဖျော်ဖြေမှုများမှအပ မည့်သည့်အလုပ်မျိုးတွင်မဆို ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းမှ တားမြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ကလေးအလုပ်သမားများအား အန္တရာယ်ရှိသော အလုပ်အကိုင်များ လုပ်ကိုင်ခြင်းမှ တားမြစ်ထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် လက်ရှိအလုပ်သမားဥပဒေအရ အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံး အသက်အရွယ်မှာ အသက် ၁၄ နှစ် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကွန်ဗင်းရှင်းအရ နိုင်ငံများတွင် ကလေးအလုပ်သမားများ အမြစ်ပြတ်ပပျောက်ရေးအတွက် နိုင်ငံအဆင့်ပေါ်လစီများ ချမှတ်ရမည်ဆိုသော အချက်လည်း ပါဝင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဤပြဌာန်းချက်အား သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ၁၇၈ မြောက်နိုင်ငံဖြစ်လာပြီး လက်ရှိတွင် အသက် ၅ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်အရွယ် ကလေးအလုပ်သမား ၉.၃ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ကိုင်နေရသော ကလေးအလုပ်သမားပေါင်း (၆) သိန်းကျော်ရှိသည်။
ILO နှင့် UNICEF တို့မှ ထုတ်ဝေသော အစီရင်ခံစာ အရ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကလေးအလုပ်သမားပေါင်း ၁၅၃ သန်းရှိနေပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း ပိုမိုအန္တရာယ်ကြီးစွာနှင့် ပုန်းကွယ်စွာဖြင့် လုပ်ကိုင်ရသော လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေမျိုးနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည်။
စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများ၊ မိသားစုဝင်များ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းစသည့် ဆိုးဝါး လာသော အခြေအနေများသည် ကလေးများအား ကျောင်းပညာရေးနှင့် အလှမ်းဝေးစေရန် တွန်းအားပေးလျက် ရှိရုံသာမက မိဘမဲ့ဘဝသို့ ရောက်ရှိသွားခြင်း၊ ငွေကြေးအခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်စေခြင်းတို့သည် ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ဆက်နွယ်လျက်ရှိသော အကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်။ အဆိုပါအခြေအနေများသည် သန်းပေါင်းများစွာသော ကလေးသူငယ်များကို ငယ်ရွယ်သောအချိန်မှာပင် အန္တရာယ်ရှိသော လုပ်ငန်းခွင်များသို့ တွန်းပို့လျက်ရှိသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလ အထိ ကိန်းဂဏန်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူပေါင်း (၆)သောင်းခန့် အလုပ်လက်မဲ့ဘဝသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အခြေအနေများ ပိုမိုဆိုးရွားလာပါက အလုပ်သမားများ၏ လစာဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ပိုမိုများပြားသော အလုပ်သမားများအား အလုပ်ရပ်စဲခြင်း အခြေအနေ များနှင့် တွေ့ကြုံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းသိရှိပါသည်။
ILO ၊ UNICEF အပါအဝင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများသည် သတိထားစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ချက်များ၏ အရေးပါမှုများအပေါ် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်လာစေရန် ကမ္ဘာ့ကလေးအလုပ်သမားဆန့်ကျင်ရေးနေ့အား ကြိုဆိုသော အားဖြင့် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး ကလေးသူငယ်များအား ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြောင့် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးသက်ရောက်မှု များမှ အကာအကွယ်ပြုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအရာရှိ Donglin Li မှ “ကလေးအလုပ်သမားဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက် (NAP) ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနဲ့ ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့မှာ အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးမည့် အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်အရွယ်သတ်မှတ်ခြင်း ဆိုင်ရာပြဌာန်းချက် အမှတ်- ၁၃၈ တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကလေးအလုပ်သမား အမြစ်ပြတ်ပပျောက်ဖို့ ထင်ရှားတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် “ယခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ အခြေအနေတွေကို ကျော်လွှားရမှာဖြစ်ပြီး ၂၀၂၅ ခုနှစ်မှာ ကလေးအလုပ်သမားအလုံးစုံ ပပျောက်ရေးအတွက် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင် ၈.၇ ကို ရရှိအောင် အတူဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကိုဗစ်-၁၉ ရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေကို အတူတိုက်ထုတ်နေကြသလိုပဲ ကလေးသူငယ်တွေအတွက် ထပ်တိုးကာကွယ်မှုတွေပေးသွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်မှုတွေကနေ ကလေးသူငယ်တွေ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အလုပ်စေခိုင်းမှုတွေဆီ တွန်းပို့ခံရခြင်းတွေက တားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကျောင်းထွက်ရမယ့် အခြေအနေမျိုးတွေ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေ လျော့နည်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု UNICEF မြန်မာ၏ လက်ထောက်ကိုယ်စားလှယ် Alessandra Dentice မှ ပြောကြားသည်။ ထို့အပြင် “ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တစ်စုတစ်စည်း တည်းဖြစ်တဲ့ ချဉ်းကပ်မှုတွေအဖြစ် ကလေးသူငယ်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကို ပိုမိုအားကောင်းစေဖို့ လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်သလို ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ မမျှတမှုတွေကို ဖြေရှင်းကြဖို့၊ ပညာရေး အဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရေးနဲ့ အားလုံးလက်လှမ်းမီ နိုင်ရေး အပါအဝင် ကလေးများရဲ့ အခွင့်အရေးကို လေးစားအသိအမှတ်ပြုကြဖို့ လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ကမ္ဘာ့ကလေးအလုပ်သမား ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အသိပညာမြှင့်တင်ရေး ကမ်ပိန်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန နှင့် ILO၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်သံရုံးနှင့် ပူးပေါင်းကာ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ အစီအစဉ်ပေါင်းများစွာ ကျင်းပလျက်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်ဘူတာကြီး၊ ဒလကူးတို့ဆိပ် နှင့် Junction City တို့တွင် ဓါတ်ပုံများ ခင်းကျင်းပြသသွားမည်ဖြစ်သည့်အပြင် အွန်လိုင်းကမ်ပိုင်းများနှင့် သတင်းစကား ဖြန့်ဝေခြင်းများကို လာမည့်လများတွင် လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးတို့တွင် အသိပညာမြှင့်တင်ရေး လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်များကို လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ Tim Enderlin မှ ကမ်ပိန်းအား ထောက်ပံ့ပေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ “ကလေးတွေ အလုပ်လုပ်စရာမလိုဘူးဆိုတာ ရိုးရှင်းတဲ့သဘောတရားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အနိမ့်ဆုံးအသက်အရွယ် သတ်မှတ်ချက်ပြဌာန်းချက်အား သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးမှုအပေါ် ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ အရမ်းကိုအရေးကြီးလှတဲ့ ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း လုပ်ဆောင် ရမည့် အရာတွေ အများကြီးကျန်ရှိနေတာကို သတိပြုရမှာဖြစ်သလို ကိုဗစ်-၁၉ ရဲ့ အခြေအနေဟာလည်း မသေးလှပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်သံရုံးအနေနဲ့ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန နှင့် ILO က စီစဉ်တဲ့ ယခုနှစ် ကမ္ဘာ့ကလေးအလုပ်သမား ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ကမ်ပိန်းကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ပံ့ပိုးပါတယ်။” ဟုပြောကြား သည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကုစားမှုအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးအခြေပြု ကလေးဗဟိုပြုတုံ့ပြန်မှု
ကမ္ဘာ့ကလေးအလုပ်သမား ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် နှစ်စဉ် ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပလျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကလေးအလုပ်သမားများ၏ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၂၅ ခုနှစ် နောက်ဆုံးထား၍ ကလေးအလုပ်သမားများ ပပျောက်ရေး စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို တွန်းအားပေးသည့် လှုပ်ရှားမှု များကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
ကုလသမဂ္ဂသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကလေးလုပ်သားပပျောက်ရေးနှစ်အဖြစ် ကြေညာခဲ့သည်။ ထိုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိရန်အတွက် သိသာထင်ရှားသော တိုးတက်မှုများရရှိနေစဉ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါသည် အစိုးရများနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကြိုးပမ်းနေမှုများကို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ (ILO) သည် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ILO ပြဌာန်းချက်များနှင့် အကြံပြုထောက်ခံချက်များ၊ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းကို အခြေခံ၍ အားထုတ်မှုများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်နှင့် ကလေးများအားလုံးကို ကလေး အလုပ်သမားများဖြစ်လာနိုင်သည့် ဘေးအန္တရာယ်များမှ ကာကွယ်ရန်၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါအား ကုစားမှုအစီအစဉ်တွင် ကလေးများကို ဦးစားပေးအဆင့် တွင်ထားရှိရန် ဆော်ဩလျက်ရှိသည်။ ILO ၏ အကြံပြုထောက်ခံချက်များတွင် -
၁။ အလုပ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများကို ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်များ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း - အလုပ်ရှင်များ၊ အလုပ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုအားလုံးအား ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ကျန်းမာရေး ခြိမ်းခြောက်မှုအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရမည်။
၂။ လူတိုင်းအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများပေးခြင်း - လူမှုကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှုများ သည် မိသားစုများကို ကျန်းမာရေးနှင့်စီးပွားရေး ထိခိုက်ခံစားရမှုများအား ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စေရန်အတွက် အရေးပါသော အထောက်အပံ့များပေးသည်။
၃။ လူတိုင်းအတွက် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော အစိုးရပညာရေး ပေးအပ်ခြင်း - ကိုဗစ်-၁၉ ရိုက်ခက်မှုကြောင့် နိုင်ငံပေါင်းများစွာတွင် ကျောင်းများပိတ်ထားရလျက်ရှိသည်။ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ပေးနေရသော ကလေးသူငယ်များ သို့မဟုတ် ကလေးအလုပ်သမားဘဝသို့ ရောက်ရှိရန် အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်နေသည့် ကလေးသူငယ်များသည် ကျောင်းစာသင်ခန်းများသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရန် အခွင့်အရေးလွန်စွာနည်းပါးနေလျက်ရှိသည်။ သို့ဖြစ်၍ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ အထောက်အကူလိုအပ်ချက်များကို အနိမ့်ဆုံး သို့မဟုတ် လုံးဝမလိုအပ်တော့သည်အထိ လျှော့ချပေးရန် လိုအပ်သည်။
၄။ ထောက်ခံအားပေးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို မြှင့်တင်ခြင်း - ထိခိုက်လွယ်သောကလေးများနှင့် မိသားစုများကို မီးမောင်းထိုးပြရန်နှင့် အကျပ်အတည်းများကို ကုစားသည့်အစီအစဉ်တွင် ကလေးများ၏လိုအပ်ချက်ကို အဓိကဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြရန် ပို၍အရေးကြီး ပါသည်။
အလုပ်သမားများ၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် ၎င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းများသည် လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များနှင့် ကူးစက်မြန်ကပ်ရောဂါ၏ စီးပွားရေးအကျိုးဆက်များကို ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းခြင်းဖြင့် ကလေး အလုပ်သမားများ ပေါ်ပေါက်မလာအောင်တားဆီးရာတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပါသည်။ လူမှုရေး အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းများသည် မျှတသောအခက်အခဲစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် တုံ့ပြန်ရေးတို့အတွက် အရေးကြီးပြီး အလုပ်သမားများ၏အခွင့်အရေး၊ ကလေးသူငယ်များ၏အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် စီးပွားရေးစဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်လက်လည်ပတ်ရေးတို့အတွက် အလွန်အရေးပါကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ILO ၏ ကလေးအလုပ်သမားဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အမေရိကန်နိုင်ငံ အလုပ်သမားဌာနမှ ပံ့ပိုးကူညီသော Myanmar Programme on the Elimination of Child Labour (My-PEC) အစီအစဉ်အရ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကလေးအလုပ်သမားများအား အဆိုးရွားဆုံးပုံစံဖြင့်စေခိုင်းခြင်းကို ကာကွယ်သည့် ILO ပြဌာန်းချက်အမှတ် ၁၈၂ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာတွင် အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ILO နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား ကလေးအလုပ်သမားများအား တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှု ကဏ္ဍများတွင် သာမက ထိုမူဝါဒများကိုမြေပြင်၌ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှုများတွင်ပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ စတင်ခဲ့သည်။ ထိုအထဲတွင် ပြဌာန်းချက်အရလိုအပ်သည့် အသက် ၁၈ နှစ် အောက်ကလေးများ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ကိုတားမြစ်ထား သော ဘေးအန္တရာယ်ရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်စာရင်းများ အပါအဝင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး ကလေးအလုပ်သမားဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက် (NAP) ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပါဝင်သည်။ ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ILO ကွန်ဗားရှင်း ၁၃၈ ဖြစ်သော အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်အရွယ် သတ်မှတ်ခြင်းအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသည် NAP ကို အလျင်အမြန် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးအလုပ်သမား ပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။ NAP ၏ အန္တိမရည်မှန်းချက်မှာ အစိုးရ၏ မူဝါဒကြေညာစာတမ်းတွင် ရေးသားဖော်ပြ ထားသည့်အတိုင်း “၂၀၃၀ တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အရွယ်မရောက်သေးသော ယောက်ျားလေးနှင့် မိန်းကလေးများအား ကလေးအလုပ်သမား အဖြစ် အထူးသဖြင့် အဆိုးရွားဆုံးပုံစံများဖြင့် ခိုင်းစေမှုများမှ ထိရောက်စွာ တားဆီးကာကွယ် ပေးမည်” ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
Communication Officer, Advocacy, Partnership and Communication Section
+9594252 94606
+959266 005 004